Sebenzisa amanzi ngobuchule kweli hlobo | News24
Sebenzisa amanzi ngobuchule kweli hlobo
Usodolophu Uelza Van Lingen
NJENGOKO unyaka ka-2017 ufikelela esiphelweni, kundinika uchulumanco ukubanqwenelela iholide esikelelekileyo abahlali kwakunye neendwendwe zethu
IKouga yindawo ekhethekiley yokuchitha iholide yehlobo, kwaye neqela lethu lakwamasipala lizakuhlala livundlile ukuze likwazi ukukhawulelana nemiceli-mngeni yokuhanjiswa kweenkonzo. Sithanda ukukhuthaza abahlali ukuba bazifumanele i-app yakwaLink, ukuze bakwazi ukuchaza kwanokulandelela iingxaki zokuhanjiswa kweenkonzo kwiiwadi zabo.
Injongo yeli phetshana kukwazisa abhahlali ngokuthe kwenzeka kwamasipala ukususela ngoAugust.
Nakubeni sibenenkqubela entle, okusasihluphayo yimbalela egqubayo. Nakubeni kukhe kwana kutshanje, umthamo wamanzi kumadama usesezantsi kakhulu kwaye nemiqathango yokongiwa kwamanzi imiselwe. Sicela ngokuzithoba kumntu wonke ukuba sisebenzise amanzi ngenkathalo naxa kunyanzelekile kuphela.
Siyanibongoza ukuba lo myalezo siwudlulise nakwiindwendwe zethu ukuze, kunye sisonke, siqinisekise ukuba iimpompo zethu zihlala zinawo amanzi kweli hlobo.
Ndininqwenelela iKrismesi emyoli nonyaka omtsha ozele ngamathamsanqa.